To protect our father land due to we love there.
အိုအိုင်စီ-အလံတော်အောက်က လျှောက်လာသော အိုရီဒူး
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ လိုင်စင်ချထားပေးရေးအတွက် ပေးလိုက်သည်မှာ နော်ဝေးအခြေစိုက် -Telenor နှင့် ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက်-Ooredoor -ကုမဏီတို့ ဖြစ်သည် ။ အရန်အဖြစ် ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ကုမဏီတို့ က ရရှိထားသည်ဟု သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရသည် ။ ၂၀၁၃-ခုနှစ်မှ -၂၀၁၆-ခုနှစ်အတွင်း မိုလ်ဘိုင်းဖုံး-သန်းပေါင်း-၃၉ သန်း-အထိ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု သိရသည် ။ ယခုတင်ဒါရရှိသော နော်ဝေးနိုင်ငံမှ ကုမဏီမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ ကို ခန့် အပ်တာဝန် ပေးမည်ဆိုသည်ကိုလည်း သတင်းတွေမှာ သိရသည် ။ ထို့ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွက်လာမည်မို့ဝမ်းပမ်းတသာ ကြိုဆိုရတော့မည်ဖြစ်သည် ။ အလုပ်အကိုင်လည်း ရရှိကြပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီ နည်းပညာများဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးနစ်ကောင်းမွန်လာကြမည်ဖြစ်သည် ။
သို့ သော် ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက် -အိုရီဒူး ကုမဏီမှမူ အလုပ်သမာများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများထက် မူဆလင်များကို အလုပ်နေရာ ခွဲဝေပေးမည်ဆိုသော သတင်းတွေ ကြားလာရသည် ။ ၄င်းသတင်းမှာ အမှန်တကယ်သာဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ဤအချက်ကို စဉ်းစားပေးရန်လိုသည် ။ မည်သူမဆို မည်သည့်ကုမဏီများက သူတို့ စိတ်ကြိုက် လူများကို ခန့် အပ်ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိရာ ယင်းသို့ခန့် အပ်ခြင်းကို ကန့် ကွက်ပါသည်ဟု ဆိုလိုက်လျှင်ပင် လူ့ အခွင့်ရေးဥပဒေနှင့် နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်အရေးဥပဒေစံနုံးစံထားတွေနှင့် မညီ ဆိုလျှင် စောဒက တက်ကြပေအုံးမည် ။ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုသော စကားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန်ခါ လက်သုံးစကားလိုဖြစ်နေရာ အမျိုးသားရေးဆိုသောစကားထက် လူပြောများနေသည် ။ သို့ သော် အမျိုးသားရေးနှင့် ချိန်ကြည့်လျှင်မူ လူ့ အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ နောက်ကချည်း ကျန်ရစ်နေသည်ကို ကမ္ဘာတ၀န်းမှာ တွေ့ မြင်နေရဆဲဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ကာတာနိုင်ငံအား တင်ဒါစနစ်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်လိုက်ပြီဖြစ်ရာ နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်စာတမ်းအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြတော့မည်ဖြစ်သည် ။ ဤနေရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးရေစီးကြောင်း နောက်ခံသမိုင်းကို လေ့လာရန် လိုသည်ဟုထင်သည် ။ ကာတာနိုင်ငံသည် မူဆလင်နိုင်ငံများထဲတွင် အဓိကကျလှသော တပ်ဦးနေရာမှာရှိသည် ။ အိုအိုင်စီအဖွဲ့ ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မကြာခဏ အိုအိုင်စီအစည်းအဝေးကို ကျင်းပသောနိုင်ငံဖြစ်သည် ။ သည်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပကတိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ကာတာနိုင်ငံနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကို ပြည်သူတို့ က လက်သင့်ခံမည်လား ဆိုသည်ကို လေ့လာရန်လိုသည် ။ ပြည်သူ့ အသံနားထောင်လိုပါသည်ဟု ဆိုသော မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ယခုမိုဘိုင်းလ်ဖုံးများအတွက် ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါပေးခဲ့ ရသည့် ကာတာနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံသားတို့လက်သင့်ခံနေသလားဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ရန်လိုသည် ။ ပြည်သူ့ အသံကို နားထောင်သင့်သည် ။ သို့ မဟုတ်က အိုအိုင်စီကဲ့ သို့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြလာကြပြီးမှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းများ ဖြစ်လာလျှင် ကောင်းသောလက္ခဏာ မဟုတ်ချေ ။ ကျွန်တော်ထင်ပါသည် ။ မြန်မာအစိုးရ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော နိုင်ငံတကာစာချုပ်စာတမ်း ချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့် ဤပြသနာသည် အကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်သည် ။ စာချုပ်ပါစည်းမျှဉ်းစည်းကမ်းများအရ အလုပ်သမားများ ရွေးချယ် ခန့် အပ်ခြင်းကအစ မူဆလင်များဖြစ်၍ ရောက်ရှိနေထိုင်မည့် နေရာတိုင်းတွင် ဗလီများ တည်ဆောက်ခွင့်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ပြီးစီးပြီး မိုဘိုင်လ်း ဖုံးကဒ်များကို ၄င်းကုမဏီမှ သတ်မှတ်သော ဖုံးကဒ်များကိုသာ သုံးစွဲပိုင်ခွင့်များကို အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောင့်ဤအချက်များကို သတိပြုထားရမည်ဖြစ်သည် ။ အကယ်၍ မူဆလင်များကိူသာ ခန့် အပ်တာဝန်ပေးမည်ဆိုလျှင် မည်သို့ သော အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်လာမည်နည်းဆိုသည်ကို တွက်ချက်ထားရန် လိုသည် ။
တကယ်လည်း အိုရီဒူးကုမဏီသည် ၄င်းတို့ ၏ မူဆလင်ဘာသာဝင်များကိုသာ ဦးစားပေးခန့် အပ်မည်သာဖြစ်သည် ။ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ မူဆလင်များကို ပြည်နယ်များတွင် သွားလာခွင့် ပ်ိတ်ပင်ထားသော ပြည်နယ်များရှိနေသည် ။ သည်တော့ ၄င်းလုပ်ငန်းသည် အောင်မြင်ပြီးမြောက်စွာ ပြီးဆုံးလေမည်လား ၊ ၄င်းမှာ အရေးကြီးသည့် အချက်ဖြစ်နေသည် ။ တစ်ရွာတကျီဆောက် ဆိုသလို ရောက်ရှိသောနယ်မြေများ၌ ဗလီများ တည်ဆောက်ခွင့်လည်း ပါရှိနေအုံးမည်ဆိုပါက အရပ်ရပ်ပြည်နယ် မြို့ ရွာအသီးသီးမှာ ဗလီများ မှိုလို ပေါက်လာကြမည် ဖြစ်တော့သည် ။ သူတို့ မှ ငွေပေါသော ကုမဏီဖြစ်၍ ဗလီတစ်လုံးဆောက်ရန် မည်သို့ မှ အပမ်းမကြီး ။ နောက်တစ်ချက်မှာ ဖုံးကဒ်များ ပြသနာဖြစ်သည် ။ နိုင်ငံတကာတွင် ကုမဏီများက သူတို့ ၏ မိုလ်ဘိုင်းဖုံးကဒ်များကို အသုံးပြုရန် ထုတ်လုပ်ရောင်းချကြသည် ။ ၄င်းဖုံးကဒ်များ၏ တံဆိပ်အမှတ်အသားသည် ဗလီများဖြင့် ရှိနေရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်မှာ ဗလီတံဆိပ်ပါ ဖုံးကဒ်များ ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဝန်းကျင်တွင် ဗလီတံဆိပ်ပါ ဖုံးကဒ်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းတွင် ဗလီတံဆိပ်ပါ ဖုံးကဒ်များ ဖေါဖေါသီသီ ရှိနေအုံးမည်ကို မျက်စိထံ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ယောင်နေမိသည် ။
အလွန်တရာ အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ဖုံးနားထောင်ခြင်း အီလက်ထရောနစ်ဖြစ်သည် ။ ယခုကာတာနိုင်ငံ၏့ မိုဘိုင်းဖုံးများကို ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာတို့ ဖြင့် တည်ဆောက်သောအခါ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို မည်သူကမှ အာမ-မခံနိုင်ချေ ။ တိုးတက်သောခေတ်ကြီးထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို မူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သော ကာတာနိုင်ငံမှ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခွင့် ရရှိနေပြီဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ သတင်းများကို မည်သို့ မှ ထိမ်းထားနိုင်ခွင့် မရှိဘဲ ပေါက်ကြားမှုများ ရှိလာနိုင်သလို လျှို့့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းလည်း အတတ်ပညာများလည်း နည်းပါးနေသည် ။ ယခုမှသည် နောင်အနာဂါတ်ကာလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေသည် အကြမ်းဖက် မူဆလင်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ မည့် အခြေအနေများ ရှိနေရာ ယခုကပင် မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ ၏ အဓိပဓိနိုင်ငံနှင့် မည်သို့ သော အကျိုးတူလုပ်ငန်းများကို မဆောင်ရွက်ခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများက ဆင်းရဲသော ကုလားကွမ်းယာဆိုင်မှ ကွမ်းယာကို ၀ယ်မစားရအောင် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြနေချိန် တကယ့်စီးပွါးရေးကုမဏီဖြစ်သော မူဆလင်ကုမဏီတို့ ကိုမူ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများအား အစိုးရက တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးသည်မှာ လူကြား၍ မကောင်းသောကိစ္စဖြစ်သည် ။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ယခုပင် အမျိုးစောင့်ဥပဒေထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် ဆရာတော် သံင်္ဃာတော်များက သံဃညီလာခံကို ပြုလုပ်ပေးနေသည်ကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြုလုပ်နေသနည်းဟု မေးမြန်းစုံစမ်းသင့်သည် ။ ၄င်းသံဃညီလာခံသည် မူဆလင်ဘာသာဝင်တို့ နှင့် အိမ်ထောင်ပြုလွန်းနေကြသော မြန်မာအမျိုးသမီးတို့ အား ထိမ်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော ညီလာခံဖြစ်သည် ။ ထို့ ကြောငိ့ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မူဆလင်အကြမ်းဖက်တို့ နှင့် ပြသနာဖြစ်နေသာ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြောင်းပြန်အနေအထားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကသာ အကြမ်းဖက် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကို ကျူးလွန်ပါသည်ဟု ပြောဆိုဝေဖန်နေကြခြင်းခံနေရသည် ။ ယင်းသို့ ခံနေရခြင်းမှာ ကာတာနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်နေသော အိုအိုင်စီညီလာခံကြောင့်ဖြစ်သည် ။
အိုရီဒူး ၀င်လာပြီးသည်နှင့် အိုအိုင်စီသည်လည်း မကြာခင် အလည်အပတ်ဖြင့် ရောက်လာမည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေ့ဆက် အခြေအနေသည် ကြည့်ကောင်းလှမည် မဟုတ်ချေ ။ လူဦးရေ သန်း ( ၆၀ ) ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ သန်း( ၄၀ ) အတွက်လည်း မိုဘိုင်းဖုံး မလိုအပ်သေးဟု ထင်သည် ။ သူတို့ ကုမဏီက သန်း-၄၀-နီးကပါးခန့်ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ယုတ္တိမတန်ချေ ။ ယုတ္တိတန်သည်ထားဦး- ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် လက်မခံသင့်ပေ ။ ကာတာနိုင်ငံအား လက်မခံတော့ဟု ဆိုလျှင် အခြားအရံ နိုင်ငံများဖြစ်သော ပြင်သစ်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံတို့ က တန်းစီ စောင့်နေကြသည် ။ ထို့ ကြောင့် ၄င်းနိုင်ငံတို့ အားသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ပေးအပ်စေလိုသည် ။ နှစ်နိုင်ငံစာချုပ်စာတမ်းများ မချုပ်ဆိုမှီ မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ မှ ဤကိစ္စကို အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်သင့်သည် ။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်၌လည်း ဤနောင်ဖြစ်လာမည့် နိုင်ငံတော် ဆူဆူပူပူ ဖြစ်လာမည့် အရေးကို ဆွေးနွေးသင့်သည်ဟု အကြံပေးလိုသည် ။ သို့ ဖြစ်၍ ကွမ်းယာဆိုင်ကုလားလောက်ကိုပင် လက်မခံနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရ အိုရီဒူးကုမဏီကိုဖြင့် မည်သို့ မျှ လက်မခံသင့်ကြောင်း တင်ပြပေးလိုက်သည် ။ အကယ်၍ ဆက်လက်ပြီး အိုရီဒူးကုမဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး လုပ်ကိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက မကြာခင်လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြပွဲကြီး ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆပါကြောင်း ။။။။။
Posted by Koko Mg at 7:19 PM No comments:
ကြမ္မာငိုခိုင်းသော နေ့ ရက်များ
ကျမအနေဖြင့် ခါတိုင်းကထက် မြန်မြန်သွားချင်သောစိတ်မှာ အလိုလို ပေါ်နေသည် ။
လူငယ်လူရွယ်လည်းမဟုတ် ။ သားကြီးသမီးကြီး ရှိနေနှင့်သော ကျမအဖို့ဆန္ဒတွေ
စောနေမိသည်မှာ သည်တခါ ဆန်းပြားနေသည် ။ မရောက်ဖြစ်သော ကိုယ့်မွေးရပ်မြေကို
ရောက်ချင်ဇေါကတော့ လူတိုင်းမှာ ရှိကြသည်ချည်း ။
အမေ့အိမ်ကိုပြန်သွားဖူးသူတိုင်း သိရှိခံစား နားလည်ကြမည်ထင်သည် ။
မည်သည့်အတွက် မသ်ိစိတ်က စေ့ဆော်ပေးနေသည်လည်း မပြောတတ် ။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးက အပြန် တူတော်မောင်အား မြင်မြင်ချင်း
လေယဉ်လက်မှတ်ကို အဆင်ပြေသလားဆိုသော မေးခွန်းက ကျမနုတ်မှ အလိုလို
ထွက်ပြီးသားဖြစ်နေသည် ။ တူတော်မောင်တို့ တတွေက ကျမကို စိတ်အလိုမကျအောင်
မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ မပြုလုပ်လိုကြ ။ ဒင်းတို့ တွေ ပုဆိုးတောင်
မစည်းတတ်-မ၀တ်တတ်ကတည်းက ကျမမှာ သားတို့ အဖေရှိရာ အမေရိကသို
့လိုက်ပါသွားခဲ့ရသည် ။ ခုတော့ တူတော်မောင်တို့ က လူပျိုကြီးဖါးဖါး
ဖြစ်နေသည် ။ မိသားစုဖွင့်လှစ်ထားသော ကုမဏီမှာ မန်နေဂျာကြီးဖြစ်နေပြီ ။
မနက်ဖန်သွားရတော့မည်မို့စစ်တွေကို စဉ်းစားကြည့်မိသည် ။ ကျမမှာ
စစ်တွေတွင် ခဏလေးနားပြီး မောင်တောမြို့ သို့သွားရအုံးမည် ။ အမေ
့အိမ်မှာ အေးအေးလူလူ အပမ်းဖြေချင်သည် ။ အမေတို့ အဖေတို့ အတွက်
ကောင်းမှူအလှူတွေ ပြုလုပ်ချင်သည် ။ ပြီးရင် စစ်တွေတွင် မပြန်သေးခင်အထိ
နေလိုက်အုံးမည် ။ ရန်ကုန်ကိုရောက်ကတည်းက စီစဉ်ရေးဆွဲထားသော အစီအစဉ်မှာ
ကျမအတွက် အံဝင်ဂွင်ကျ ရှိနေဆဲ ။ တူမလေး မြသန္တာကလည်း ကုမဏီတွင် ခွင့်ယူကာ
ကျမနှင့်အတူ လိုက်ပါမည်ဟု ပြောထားရာ သူ့ အကိုက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ
ခွင့်ပြုရှာသည် ။ မြသန္တာ တယောက်ထဲတော့မဟုတ် ။ သူ့ ရုံးက
မြသန္တာ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သော လဲ့ လဲ့ သက် ဆိုသော ရန်ကုန်သူ ချောချောကလေး
တယောက်ကလည်း အဖေါ်ထည့်ပေးလိုက်သေးသည် ။
ကျမတို့မှာ လိုအပ်သည်များကို ယူဆောင်စုဆောင်းရသည်မှာ
မလွယ်လှချေ ။ ကျမ၏ အလှူအဒန်းများတွင် လှူဘွယ်ပစ္စည်းများအတွက် မကျန်ရစ်ခဲ
့ရအောင် ဂရုတစိုက် မှတ်ရ သိမ်းရနှင့် တအိမ်လုံး ကြွက်ကြွက်ညံကာ အသံတွေ
ထွက်နေကြရသည် ။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင် လှူဘွယ်ပစ္စည်းများကို
လှူဒန်းရမည်မို့ကျမတို့ တတွေမှာ နေ့ နေ့ ညည သွားနေကြသည်မှာ
အိမ်မှာတောင် ထမင်းမစားဖြစ် ။ စားသောက်ဆိုင်တခုခု ၀င်ပြီး
စားသောက်လိုက်သည်နှင့်ပင် အချိန်တွေ ကုန်ခဲ့ ရသည် ။ လေယဉ်လက်မှတ်
အားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီဆိုတော့ မနက်ဖန် အစောကြီးမှာ လဲ့ လဲ့ သက်ကို
မရမ်းကုန်းရှိ နေအိမ်က စောင့်ဆိုင်းဖို့မှာထားလိုက်ရသည် ။ ကျမရင်မှာ
တော်တော် မောနေမိဖြစ်သည် ။ လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း-၃၀-ကျော်မှ တကြိမ်သာ
ပြန်ဖြစ်ခဲ့ သော မွေးရပ်မြေသည် ကျမကို အလွမ်းများနှင့် ဆီးကြိုနေပြီလား
မပြောတတ် ။ တညလုံး တောင်တောင် အီအီ တွေးတောပြီး အိပ်ရာထဲ လှဲနေရတော့
ကဗျာဆရာမ ကြည်အေး၏ တစ္ဆေကဗျာကို ပြန်လည် သတိရလာတော့သည် ။
“ အိပ်ရာတွေလဲ- ကြေမွတွန့် လိပ်-သိပ်စိတ်ညစ်တယ်-“
ကျမက အိပ်ရာတွေထဲ ဘယ်လူးညာလူးနှင့် တညလုံးမိုးကြောင်တောင် လင်းခါမှ ခဏမျှ
ဤနေ့ ကား သောကြာနေ့ 
လဲ့ လဲ့ သက်က သောကြာနေ့ အကြောင်းကို မသိတော့ အိမ်ပေါ်မှ လူတွေကို
ကြည့်နေဖြစ်သည် ။ ကျမကတော့ ဒီကောင်မလေးကို ဘာတွေ ကြည့်နေမှန်း သိနေပြီ ။
မနေ့ ကတောင် ဒီကောင်မလေး စကားတခွန်း ပြောသေးသည် ။
“ ကြီးမေရယ်- ကြီးမေတို့ မောင်တောမြို့ က ရခိုင်မြို့ လား
-ကုလားမြို့ လား-သမီးတော့ တခါတလေ ကြောက်တောင် လာနေတယ် “
လဲ့ လဲ့ သက်အဖေက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တဦးဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်မှာ
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည် ။ အကိုဖြစ်သူ ကိုသက်ဦးက
နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားဖြစ်ပြီး တခါတလေ ဖလော်ရီဒါကို ရောက်သောအခါ ကျမတို
့အိမ်သို့အလည်လိုက်ပါလာတတ်သည် ။ ရွှေတောင်ကြားလမ်းတွင်
အိမ်နီးနားချင်းမို့သူမတို့ မိသားစုနှင့် ကျမတို့ က ရပ်ဆွေရပ်မျိုးလို
ဖြစ်နေသည် ။ ကောင်မလေးပြောတော့ ကျမက ပြုံးပြနေလိုက်ရသေးသည်ကို အမှတ်
“ ကြီးမေ - ကြီးမေ- တံခါးတွေ ပိတ်ထားလိုက်တော့- ထွန်းလှ - တံခါး တွေ
ကျမက မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး အသံကို နားစွင့်နေလိုက်သည် ။ လဲ့ လဲ့ သက်က
ကျမကို တချက်မျှ စောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
“ မြသန္တာကော - သမီး - မြသန္တာကော - ဟေ့ - ဘာဖြစ်လို့တံခါးတွေ
ပိတ်ရမှာလဲ - ငါ့ကို ပြောပြကြပါအုံး “
အိမ်အောက်ထပ်မှာ ပြေးသံလွှားသံတွေ ကြားရသည် ။ ပြန်လည်တုန်
့ပြန်သံတွေကို ကျမ မကြားရသေး ။ အိမ်အောက်မှ တံခါးတွေ ပိတ်သံတွေ ကြားရသည်
။ ကျမတို့ တိုက်က ဘာဂျာတံခါးတွေနှင့်မို့သံတံခါးတွေ
ပိတ်လိုက်ပြီဆိုလျှင် အရာရာကို စိတ်ချရပြီးသားဖြစ်သည် ။ မြသန္တာက
အိမ်ပေါ်သို့ပြေးတက်လာပြီး ပြူတင်းပေါက်တွေကို ပိတ်လိုက်သည် ။
“ မြေးလေး- ဘာဖြစ်နေကြတာလဲ - တံခါးတွေ လိုက်ပိတ်နေကြတာ “
“ အဘွား- လမ်းမပေါ်မှာ ကုလားတွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး - လက်နက်တွေကိုယ်စီနဲ့ -
ဘာဖြစ်လာကြလဲ မသိဘူး “
ကျမက ပြူတင်းပေါက်နားကို ချဉ်းကပ်ပြီး ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
အစပိုင်းကတော့ လူငယ်ချင်းချင်း ရန်ပွဲဖြစ်နေကြသလားဟု ထင်ခဲ့ သည် ။
“ ဟင် - ကုလားတွေ နဲတာ မဟုတ်ဘူး မြေးလေး- ဒီလိုဆိုရင် ကုလားရခိုင်
ပြသနာတော့ ဖြစ်လာပြီပေါ့ ကွယ် “
“ဘာပြောတယ် - ကြီးမေ - ကုလား ရခိုင် ပြသနာဖြစ်လာပြီ - ဘာဖြစ်လို့ 
ဖြစ်လာရတာလဲ ကြီးမေ ရယ် - သမီး ကြောက်တယ် -
“ မကြောက်နဲ့သမီး - ကြီးမေ - ရှိတယ် နော် - သမီး ဘာမှ မဖြစ်စေရဘူး “
ပြောရင်း ဆိုရင်း အိမ်ပေါ်ထပ်ကို ခဲနှင့် ပစ်ခတ်သံ ကြားလာရသည် ။
မှတ်ပြူတင်းများ ကွဲသွားသည် ။ ကျမအနေနှင့် တခုသာ ရှိတော့သည် ။
ခေါင်းအေးအေးနှင့် စဉ်းစားရတော့မည့် အပိုင်းဖြစ်လာသည် ။
“ မြသန္တာရယ်- ဗွီဒီယိုသာရိုက်ထားလိုက်တော့- အားလုံးကို သေသေချာချာ
မြေးလေး မြသန္တာက ဤနေရာမှာ တော်ရှာသည် ။ သတ္တိကောင်းလှပါသည် ။ အမေရိကမှ
လာသော ကျမအတွက် သူမသည် အမှန်တကယ် အားကိုးရသော မြေးကလေးဖြစ်သည် ။ လဲ့ လဲ
့သက်ကလည်း သူမ၏ ဒီဂျီတယ်ကမ်မရာကလေးနှင့် ပြူတင်းပေါက်ကနေပြီး ရိုက်နေသည်
။ မြသန္တာကလည်း အလွပ်မပေးချေ ။ ဗွီဒီိယို ရိုက်နေသော ကျမတို့ အိမ်ကိုသာ
မြင်သွားပါက ကျမတို့ ၏ အသက်အိုးအိမ်မှာ မစဉ်းစားရဲအောင် ဖြစ်မိသည် ။
တလမ်းလုံးရှိသမျှ ရခိုင်လူမျိုးတွေအိမ်ကို ခဲများဖြင့် ပစ်ခတ်နေကြသည်
။ လူပေါင်းသောင်းနှင့်ချီပြီး တုတ်ဒါးလက်နက်များဖြင့် သဇင်ဟိုတယ်ကို
မီးရို့ဖျက်ဆီးလိုက်ကြသည်ကို မြင်ရသည် ။ ဈေးလမ်းတလျှောက်တွင်
ဖျက်ဆီးနေကြသော ကုလားတွေကို ကျမတို့ မှာ လူလို့မမြင်တော့ ။
သရဲသဖက်သဘွယ် ကြောက်မက်စွာ မြင်လာကြသည် ။
တညလုံး ရခိုင်လူမျိုးတွေနေအိမ်များကို မီးရို့့ ဖျက်ဆီးခြင်း ၊
လူသတ်ခြင်းများကို မည်မျှ ပြုလုပ်လိုက်ပြီဆိုသည်ကို ကျမတို့မခန်
့မှန်းနိုင် ။ လုံခြုံရေး တွေ နစကတွေ ရဲများကလည်း လက်ထဲတွင်
သေနတ်ကိုင်ထားသော်လည်း မည်သို့ မျှ ပစ်ခတ် နှိမ်နှင်းသည်ကို မကြားရ ။
တမြို့ လုံး မီးလောင်နေရာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ရခိုင်လူမျိုးများမြို့ ဖြစ်သော
မောင်တောမြို့ ကား ကုလားတို့ ကြောင့် ကျီးလန့် စာစား ဖြစ်နေကြရပြီ ။
သောကြာနေ့ ဆိုလျှင် ကုလားတွေက ပလီတက်ပြီး ဥပုသ်စောင့်ကြရသည် ။
တကြိမ်မဟုတ် ။ တနေ့ မှာ ငါးကြိမ်ခန့်ဥပုသ်စောင့်သည်ဟု ပြောကြသည် ။
တရားထိုင်ကြရသည်ဟု ဆိုကြသည် ။ တရားထိုင်သည်ဆိုလျှင် စိတ်ငြိမ်းချမ်းပြီး
ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်ကြရသည်ဟုသာ ဘာသာတိုင်းမှာ ရှိကြသည် ။ ခုတော့
ပလီတက်ပြီး တရားထိုင်ပြီးသည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေကို အသေရရ အရှင်ရရရ
လည်ပင်းလှီး -သတ်ဖြတ်- အိမ်များကိုမီးရို့ပြုလုပ်ကြတော့သည် ။ သူတို့ ၏
ဘာသာရေးမှာ ယခုလို အကြမ်းဖက်အောင် ခိုင်းစေထားခြင်းတော့ ရှိမည်မဟုတ်-
လက်တွေ့ မှာတော့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆောင်ရွက်ကြသည် ။
မြသန္တာ၏ ရိုက်ထားလိုက်သော ဗွီဒီိယိုကို ပြန်၍ ကြည့်ကြသောအခါ
တဆယ်ကျော် ကုလားလေးတွေကအစ မော်လီဗီ တရားဟောဆရာများကိုပါ မြင်ရသည် ။ သူတို
့လက်ထဲမှာ တုတ်ဒါးကိုယ်စီနှင့် ။ အကယ်၍ ရခိုင်လူမျိုး တယေက်ယောက်ကိုများ
တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ လျှင် အသက်ရှင်ဘွယ်ရာ မရှိ ။ ခုတ်ထစ်သတ်ဖြတ်ကြမည့်
အသွင်အပြင်များကို မြင်ရသည် ။ ညနေပိုင်းတွင် ဆရာဝန် မိသားစုကိုလည်း
ဒါးနှင့် ခုတ်၍ သေဆုံးသွားရပြီဆိုသော သတင်းကြားလာရသည် ။ လဲ့ လဲ့ သက်မှာ
ယင်းသတင်းကို ကြားသည်နှင့် မျက်နှာတွင် သွေးတစက်မျှ မရှိတော့။
“ ခဏလေးပါ မြေးလေးရယ်- ဒီပြသနာဖြစ်ပြီးသွားရင် မကြာခင် အခြေအနေ
တည်ငြိမ်လာမှာပါ- အဲဒီခါကျရင် ကြီးမေတို့ရန်ကုန်ကို ပြန်ကြမှာပေါ့နော်
- ကြီးမေတို့ အိမ်ကို ဘယ်သူ တယောက်ကမျှ မီးလာရှို့ လို့မရဘူးကွယ်-
တကယ်လို့ကြီးမေတို့အိမ်ကိုသာ အဲဒီလို မီးလာရို့ ရင် ဒီမြို့ ဟာလဲ
ပြာကျပြီပေါ့- ကုလားတွေက ကြီးမေတို့ အိမ်ကိုတော့ အဲဒီလို မလုပ်ရဲဘူးကွဲ့ 
- မြေးလေးရယ် “
မြသန္တာနှင့် လဲ့ လဲ့ သက်တို့ ကို အားတက်စေအောင် ပြောသာပြောရသည် ။
ကျမလည်း အားမရှိလှပါ ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကုလားတွေက လူသားစား
ဘီလူးသဖက်လို အသွင်အပြင်က ကြောက်မက်စရာ ကောင်းနေသည်ကို နေ့ စဉ်ရက်ဆက်
မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်နေရသည်ဘဲ ။
လွန်ခဲ့ သော အပါတ်က ကျမတို့ မိသားစု ၏ တိုက်မှာ မောင်တောမြို့ နယ်ရှိ
ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှ ရဟန်းသင်္ဃာတော်မြတ်များကို ဆွမ်းကျွေးအမျှဝေ
အလှူအဒန်း ပြုလုပ်ခဲ့ သည် ။ ကွယ်သူမိဖနှစ်ပါးအား ရည်စူးပြီး
ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရာ တနယ်လုံးမှာ ရှိသော ဆွေမျိုး မိသင်္ဂများအပြင် တဖက်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ကယုချောင်း ၊ မြစ်နားရွာတို့ က ဆွေမျိုးများပါ
လာကြသည် ။ ကျမ၏ မိဖတို့ မှာ ဤသို့့အလှူအဒန်းများကို နှစ်စဉ်
လဲ့ လဲ့ သက်က နိုင်ငံခြားက လူတွေ လာသည်ဆိုတော့ ကောင်မလေးခမြာ
ပျော်လိုက်သည်မှာ တော်တော် ရီစရာကောင်းသည် ။ သူက နိုင်ငံခြားက
လူတွေဆိုတော့ ကုတ်နဲ့တိုင်နဲ့လာမည် ထင်ထားသည် ။ ခုတော့
ရခိုင်လုံချီတွေဝတ်ပြီး လာကြသည်ကိုမြင်တော့ ကောင်မလေးမှာ ရီလဲ
ကုလားတွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မောင်တောတမြို့ လုံး
ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ထားသည် ။ ကျမတို့ မှာ သတင်းအချက်အလက်များကို လာသမျှ
လူများထံမှာ နားထောင်ရသည် ။ စစ်တွေမြို သို့ပြန်သွား၍လည်း မရသေး ။
သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ကျမတို့ က မြို့ မိမြို
့ဖအနေနှင့် ပြောကြ ဆိုကြရပြီ ။
“ ကျမကတော့ ဆရာတော် ဦးပညာသာရကို အခုလို သတ်ဖြတ်ပစ်လိုက်တာကို ဘယ်လို
စိတ်ထဲ ကြေနပ်နိုင်မှာလဲ ရှင် - ဆရာတော်က ကျမတို့ အိမ်မှာ နေ
့ဆွမ်းအတွက်လာယူတာရှင့် - အခုလို နေ့ ဆွမ်းလှူဒန်းနေတာကလဲ နှစ်ပေါင်း
-၂၀- နီးကပါး ရှိပြီ- ကျမတို့ ရဲ့ဆရာတော်ဟာ ဟိုတနေ့ ကဘဲ ကျမတို့ ရဲ့ 
မိဖကို ရည်စူးပြီး ပြုလုပ်တဲ့အလှူကိုလဲ ကြွခဲ့ ပါသေးတယ်ရှင် “
ကျမကို အင်တာဗျူး ပြုလုပ်နေသော သတင်းထောက်လေးတဦးကို ကျမက
ပြောပြနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ပြီးတော့ ကျမအသည်းနာဆုံးက ကျမ၏ တူတော်သူ
အောင်ချမ်းသာကို တပည့်ဖြစ်သူ ကုလားလေးတွေက အသေသတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။
သရေကုန်ဘောင်ကျေးရွာမှ ကျောင်းဆရာလုပ်နေသော အောင်ချမ်းသာမှာ ကျမ၏
အဒေါ်ဖြစ်သူ၏ မြေးဖြစ်သည် ။ ဘွဲ့ ရ ကျောင်းဆရာတဦးဖြစ်ပြီး မြို့ ပေါ်တွင်
မနေဘဲ ကျေးလက်တောရွာမှာသာ ကျောင်းဆရာဘ၀ဖြင့် အသက်မွေးကျောင်းနေသူဖြစ်သည်
။ သူလည်း ကျမတို့ ၏ အလှူပွဲကို လာခဲ့ သူဖြစ်သည် ။ ခုတော့ ကျမ၏
ဆွေမျိုးတွေ -ဆရာတော်တွေတို့ မှာ ကျမကို မျက်နှာပြ လာခဲ့ ကြသလို
ကုလားတွေသတ်၍ အသေဆိုးနဲ့သေဆုံးခဲ့ ကြလေပြီ ။
ကုလသမ္မဂမှ လူ့ အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တာနား လာသောအခါ သူက
ကျမတို့ ၏ ရခိုင်လူမျိုးတွေကို လူသတ်သမားလိုလို အကြမ်းဖက်သမားလိုလို
ပြောလာနေတော့ ကျမနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့ သည် ။ ကျမဖြေရှင်းလိုက်သော စကားကို
သူကြားရတော့သည် ။ သူ့ အနေဖြင့် ယုံကြည်သည် မယုံကြည်သည်ဆိုသည်မှာ
အကြောင်းမဟုတ် ။ ခုတော့ ကျမ၏ တူတော်သူ အောင်ချမ်းသာနှင့် ဆရာတော်
ဦးပညာသာရတို့ အတွက် ကျမမျက်ရည်ကို အလဟသ အဖြစ်မခံနိုင် ။
နောက်တရက်မှာ စစ်တွေမြို့ သို့လာခဲ့ ကြသည် ။ လဲ့ လဲ့ သက်ရော
မြသန္တာရော ယခုအဖြစ်အပျက်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တော့ဟု ပြောရှာကြသည် ။
စစ်တွေမြို့ မှာ ကျမအလှူပြုလုပ်ခဲ့ သော ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတွင်
ဒုက္ခသည်များစွာမြင်ရသည် ။ ယင်းအကြားမှာ လွန်ခဲ့ သော ကျမတို
့မိသားစုအလှူတွင် အကူအညီပေးခဲ့ ကြသော မင်းဂံရပ်ကွက်မှ မောင်လှဋ္ဌေးတို့ ကို
ကြည့်မိသည် ။ မတွေ့။ မေးကြည့်တော့ ကုလားတွေ သတ်၍ သေဆုံးသွားပြီဟု
“ အဲဒီတုံးက ကြီးမေရဲ့အလှူမှာ အကူအညီပေးခဲ့ ကြတဲ့ 
လူငါးဦးစလုံးဟာ သေဆုံးသွားကြရတယ် ကြီးမေ - ဒါ့ကြောင့် ကြီးမေ သူတို့ ကို
မတွေ့ တာပေါ့ဗျာ “
“ ဘာပြောတယ် - သူတို့ ငါးဦးစလုံး သေဆုံးသွားရတယ် - “ “
“ ဟုတ်တာပေါ့ ကြီးမေရယ် - သူတို့ တွေလဲ သေဆုံးသွားသလို ကျနော့်ကိုလဲ
သေဆုံးပြီထင်ပြီး ထားခဲ့ ကြတာ ကြီးမေရဲ့ - ဟောဒီမှာ ကြည့်ပါလား “
လူငယ်လေးက အင်္ကျီချွတ်၍ ပြသည် ။ မကြည့်ရက်စရာ ။ ကြောပြင်မှာ ဒါးဒဏ်ရာ
အစင်းလိုက်ကြီးနှင့် ၊ မြင်ရသည်မှာ ကြက်သီးထစရာဖြစ်သွားသည် ။ မိန်းခလေး
တဦးက အနားသို့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ ရွံ့ ကပ်လာသည် ။ မျက်နာပြင်မှာ
မည်သည့်အလှဆီမှ လိမ်းချယ် မထား ။ နွမ်းနယ်နေသော မျက်လုံးဖြင့် ကျမကို
တချက်ကြည့်သည် ။ မြသန္တာတို့လဲ့ လဲ့ သက်တို့ နှင့် အသက်အရွယ်
မတိမ်းမစောင်း ။ သို့ သော် သူ့ မျက်နာပြင်ကား ကြောက်ရွံ့စရာတို့ နှင့်
အတိရှိနေသောကြောင့် အပျိုပေါက်လေးတဦး၏ အလှများ ရှာမတွေ့။
“ ကြီးမေ - သမီးတို့ ဟာ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်အသက်ကို ကိုယ် လုနေရတဲ
့အချိန်ပါ ကြီးမေရယ်- မျက်နှာမှာ သနပ်ခါး လိမ်းဖို့ အချိန် မရသလို
မိပ်ကပ်လဲ လိမ်းဖို့ အချိန်မရ ပါ ။ အကိုတွေက နိုင်ငံခြားသွားပြီး
အလုပ်တွေ သွားလုပ်နေကြတော့ သမီးတို့ မှာ မိဖအိုတို့ ကို စောင့်ရှေက်
ကာကွယ်နေကြရပါတယ် - သမီးတို့ သေဆုံးမှ အဖေတို့ အမေတို့သေကြရပါလိမ့်မယ်
ကြီးမေ- အခုတော့ သမီးတို့ က အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် မိန်းမကြမ်းတွေ
ဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် - ဒါပေမဲ့သမီးတို့သေမှ ဒီမြို့ဒီရွာ မီးရို
့ခံရ ပျက်စီးရမှာပါ ကြီးမေရယ် - သမီးတို့ မှာ သတ္တိ တွေ ရှိပါတယ် - အခုလို
ကြီးမေတို့ လို အားပေးလာတဲ့လူတွေ ရှိနေလို့ ကတော့ သမီးတို့ 
သေပျော်တာပေါ့ ကြီးမေရယ် -----
Posted by Koko Mg at 6:54 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုးများရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ၏ အဓိက မဟာဗျူဟာ ပန်းတိုင်ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးကို သိမ်းပိုက်ဝါးမျိုရေး အစီအစဉ်သည် ဘယ်ဘော့မှ အထမြောက် အောင်မြင်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ အရှင် ခေမာစာရက မိန့်ဆိုလိုက်သည်။
ဇွန်လ ၁၆ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့် အချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုင်အိုဝါ ပြည်နယ် (Iowa State) မာရှဲလ်တောင်း (Marshalltown) မြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသား အင်အားစုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတရပ် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်လာသူများက ဘင်္ဂလီ-ရခိုင် ပဋိပက္ခနဲ့ ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ အရှင် ခေမာစာရက ထိုသို့ မိန့်ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အိုင်အိုဝါ ပြည်နယ် (Iowa State) မာရှဲလ်တောင်း (Marshalltown) မြို့ရှိ ရခိုင်အမျိုးသား အင်အားစုများနှင့် အရှင် ခေမာစာရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာ ပထမအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားများ ၁၀၀ နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးအမည်သစ် မှည့်တွင်ပြောင်းလဲသည့်ကိစ္စမှာ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ကြောင်း၊ မည်သည့်လူမျိုးမဆို အမည်သစ်ကိုမှည့်တွင်ခေါ်ဝေါ်၍ရကြောင်း၊ သို့သော် ရခိုင်ပထ၀ီ၊ ရခိုင်မြေ၊ ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အကျိုးစီးပွား မှန်သမျှကို ထိခိုက်လာသည်မှာ ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်ကြောင်း အရှင် ခေမာစာရက ယခုလို မိန့်ကြားသည်။
“ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အမည်သစ် မှည့်တွင်ပြောင်းလဲတာက ဦးဇင်းတို့ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်လိုမျိုးမဆို နာမည်သစ် ပြောင်းလဲ မှည့်ခေါ်လို့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ နယ်မြေနှင့် အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကို ထိခိုက်လာတာကတော့ ဆန့်ကျင်မှုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်မြေမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်းလုပ်ဖို့ ၀င်ရောက်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာ အခြေချနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလီအချို့ ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဦးဇင်းတို့ သိပါတယ်။ ” ဟု မိန့်ဆိုသည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးများက ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ရခိုင်လူမျိုး၊ ရခိုင်လူမျိုးဆိုသည်မှာ ယနေ့ ခေါ်ဆိုနေသည့် ရခိုင်လူမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကို ခေါ်ဆိုခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ကမ္ဘာက လက်ခံလာအောင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် လိမ်ညာရေးသား လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ၄င်းတို့အထဲတွင် မြန်မာကျောင်းသားတချို့လည်း ပါဝင်ကြောင်း ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
“ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဟာ ရခိုင်လူမျိုးဆိုပြီး လိမ်ညာရေးသား လုပ်ဆောင် အကောင်ထည်ဖော်နေကြတဲ့အထဲမှာ မြန်မာကျောင်းသား တချို့ပါဝင်နေကြပြီး ဒီလူတွေဟာ ဘင်္ဂလီ- ရခိုင် ပဋိပက္ခကို အဓိကဖန်တီးသူတွေအဖြစ် တရားခံစာရင်းတွေထဲမှာ ပါဝင်ကြတယ်။ ” ဟု အရှင် ခေမာစာရက မိန့်ကြားသည်။
ဘင်္ဂလီများနှင့် ဘင်္ဂလီဘက်တော်သားများ ရေးသား ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိထားသော ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်နဲ့ ပတ်သက်သော စာအုပ်စာတန်းများသည် တခုနဲ့တခု ညီညွတ်တူညီမှုမရှိ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည်လည်း အကွဲအလွဲများစွာရှိပြီး မည်သည့် စာအုပ်စာတန်းသမိုင်းကို အတည်ပြုရမှန်း မသိကြောင်းနှင့် ဘင်္ဂလီများ၏ မဟာဗျူဟာများကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ရခိုင်များသာမက မြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့် ကမ္ဘာကပါ သိရှိနားလည်ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းကို အရှင် ခေမာစာရက မိန့်ဆိုသည်။
“ ဘင်္ဂလီတွေနှင့် သူတို့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေ ရေးသားထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေကို ဦးဇင်း သေသေချာချာ လေ့လာဖူးပါတယ်၊ တခုနဲ့တခုက ညီညွတ်မှုမရှိဘူး၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေဟာလဲ တော်တော်များများ ကွဲလွဲနေတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဘင်္ဂလီတွေရဲ့ မဟာပျူဟာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်က ဘာလဲဆိုတာကိုလည်း ဦးဇင်းတို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ရခိုင်တွေသာမက မြန်မာတိုင်းရင်းတွေ အားလုံးနဲ့ ကမ္ဘာကသိနေပါပြီ။ ” ဟု မိန့်ဆိုသွားခဲ့သည်။
Posted by Koko Mg at 11:47 PM No comments:
`ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ္မစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်နီးချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ သတိပေး´
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဌာနေတိုင်းရင်းသားများနှင့် ရိုဟင်ဂျာခေါ် ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်များ၏ အဓိကရုဏ်းကဲ့သို့သော ဖြစ်ရပ်များတွင် ပါကစ္စတန်အခြေစိုက် အစ္စလာမ္မစ်အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယအစိုးရမှ ၎င်း၏အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအား သတင်းအချက်အလက်များ မျှဝေပေးလိုက်ကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက် အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် ဟိန္ဒူစတန်တိုင်းမ် သတင်းစာမှ ဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပါကစ္စတန်အစ္စလာမ္မစ်အကြမ်းဖက် အုပ်စုများထဲတွင် အထင်ရှားဆုံး အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းမှာ Lashkar-e-Taiba ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ထိပ်တန်းထောက်လှမ်းရေး သတင်းအချက်အလက်များအရ ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂါလီမူဆလင်အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုများကို နောက်ကွယ်မှ အဓိကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေသည်မှာ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ္မစ် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ အထူးလေ့ကျင့်ထားသည့် အကြမ်းဖက်သမားများသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများထံတွင် စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်ခဲ့သူများဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက်များကို ထိုင်းနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ္မစ်အုပ်စုများမှ တစ်ဆင့်ရရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခက်အခဲများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိဘဲ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးမှောင်ခို ကုန်သွယ်ရေးတွင် အဆိုပါ လူနည်းစု၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု၊ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းထူထောင်ခြင်း အပါအ၀င် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် နေရာများ ဖန်တီးပေးမှုစသည့် အချက်များသည် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးကို အဓိက အကြမ်းဖက်အုပ်စုများက စိန်ခေါ်နိုင်စေရေး ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်ဟု အိန္ဒိယအစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသွားသည်။
နယူးဒေလီ၏ အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်သည့်အချက်မှာ ပါကစ္စတန် အကြမ်းဖက်အုပ်စုများမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဆလင်များကို စုဆောင်းလေ့ကျင့်ပေးပြီး အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ကျူးလွန်ရန်နှင့် ဒေသတွင်းတွင် အာသံအဓိကရုဏ်းကဲ့သို့ ဆူပူအုံကြွ သတ်ဖြတ်မှုများကို ဖန်တီးလာစေရန် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်အသုံးချမည်ကို ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် အမြောက်အမြားရှိနေသော အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတို့သည် Pakistani Inter - Services Intelligence နှင့် အစ္စလာမ္မစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ Lashkar-e-Taiba တို့၏ အရှိန်မြင့်လာသော ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ အစိုးရနှစ်ခုစလုံးက စစ်တကောင်း တောင်တန်းဒေသအတွင်း ဘင်္ဂလားအစ္စလာမ္မစ် အစွန်းရောက်အဖွဲ့ Jaish-e-Mohammed (JeM)၏ အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုများရှိကြောင်း ယုံကြည်ထားကြသည်။ ထိုအဖွဲ့သည် အထူးသဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်- မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက် Cox's Bazaar ခရိုင်မှ Teknaf sub-division အတွင်း လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ ရခိုင်ဒေသ ဆူပူအုံကြွမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် Lashkar-e-Taiba နှင့် ၎င်း၏မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို့မှ ဦးဆောင်၍ ဖိုရမ်တစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပြီး ၎င်းဖိုရမ်၏ အမည်မှာ Difa -e- Musalman Arakan - Burma Conference (Defence of Muslims in Myanmar) ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဏာရ မြန်မာအစိုးရကို ဆန့်ကျင်ရန် မူဆလင်များအား စုစည်းမည့် ကမ်ပိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Lashkar-e-Taiba နှင့် Jammaat-ud-Dawwa (JuD) တို့မှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်တွင် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးပါ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာ Jammaat-ud-Dawwa (JuD)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Nadeem Awari နှင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့မှ Shahid Mehmood Rehmatulah တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်းအဖွဲ့၏ တာဝန်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကျောင်းများမှ စီနီယာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှားမှုကို တိုးမြှင့်ရန်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများအရ Lashkar-e-Taiba ခေါင်းဆောင် Hafeez Saeed အပါအ၀င် စီနီယာအစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံအတွင်းမှ အလားအလာရှိသည့် မူဆလင်များအား စုဆောင်းရန်နှင့် အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါအကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရအား ရခိုင်ဒေသရှိ မူဆလင်များ၏ အတိဒုက္ခရောက်မှုအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိကြောင်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
Lashkar-e-Taiba ခေါင်းဆောင်များသည် ရခိုင်ဒေသရှိ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများထံ Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI), JeM နှင့် Jammaat ul Mujahideen Bangladesh (JMB) စသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် အစ္စလာမ္မစ်အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ အလည်အပတ်လာရောက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ RSO (Rohingya Solidarity Organization) နှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ပြီး အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများကို တိုးမြှင့်မည့် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရန်နှင့် အိန္ဒိယအရှေ့ဘက်ဒေသ အစွန်အဖျားတွင် အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအစိုးရ ထိပ်တန်းအရောရှိတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရသိရှိရသည်။ အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေး အေဂျင်စီများမှ Jammaat ul Arakan (JuA) တည်ထောင်ခြင်း၊ JAM မှ လေ့ကျင့်ထားသည့် အကြမ်းဖက်သမားများအကြောင်းနှင့် တခြား ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အုပ်စုများနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန်ဆင်း အစိုးရအဖွဲ့ထံ အစီရင်ခံ တင်ပြပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အိန္ဒိယထောက်လှမ်းရေးသတင်းများအရ JAM အဖွဲ့သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာနယ်စပ်အနီး Bandarban district အတွင်းရှိ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းပါးသည့် ဝေးလံသော တောတွင်းတစ်နေရာ၌ လေ့ကျင့်ရေး စခန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ကာ လူသစ်များအား စုဆောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်ကာ လျှို့ဝှက် လှုပ်ရှားမည့် အစီအစဉ်များ ရှိနေကြောင်း ၎င်းအရာရှိက ဆက်လက်ပြေားကြားသွားသည်။ ပါကစ္စတန် စစ်ထောက်လှမ်းရေး (ISI)နှင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်စပ်မှုကို အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေးမှ စတင်ခြေရာခံမိခြင်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Cox's Bazaar ခရိုင်၊ Idgan madarassa ဒေသတွင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော Noor-ul-Amin ၏ ထုတ်ဖော်ပြေဆိုချက်အရ သိရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဘာသာရေးဆရာသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ Karachi မြို့ အခြေစိုက် Dar-ul-Uloom Islamiya madarassa တွင် လေ့ကျင့်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခင်က အရည်အသွေးရှိသည့် စစ်သွေးကြွများကို ရှာဖွေစည်းရုံးသည့်တာဝန်နှင့် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများအား စည်းရုံးကာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ် စုဆောင်းလေ့ကျင့်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို အခန်းပိတ် စစ်ဆေးသည့်အချိန်တွင် သူ၏အဖွဲ့အစည်းသည် ပါကစ္စတန် စစ်ထေက်လှမ်းရေး (ISI) နှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည့်အပြင် Karachi မြို့ အခြေစိုက် HUJI- (Arakan) ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် Maulana Abdus Qudus Burmi နှင့်လည်း ပတ်သက်မှုရှိကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ၎င်းက ပါကစ္စတန် စစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့သည် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများအတွက် စစ်လက်နက်များ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြု ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၈ ရက်နေ့တွင် Noor-ul-Amin ၏ အနီးစပ်ဆုံး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးဖြစ်သည့် Ali Ahmed aka Abu Jibral ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ HUJI ၏ လက်ရှိ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Ahmed aka Abu Jibral အား ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား ပတ်စပို့စာအုပ်နှင့် အတူ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် လက်ရ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သည့် လအနည်းငယ်က ပါကစ္စတန် စစ်ထောက်လှမ်းရေး (ISI) နှင့် Karachi မြို့ အခြေစိုက် Islamiya madarassa နှင့် ငွေကြေးအလွှဲအပြောင်းပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ Ali Ahmed aka Abu Jibral ကို အခန်းပိတ် စစ်ဆေးစဉ် ၎င်းက အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံအတွင်း ဂျီဟတ်စစ်သားအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့သည် ၁၉၈၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ Waziristan မြောက်ပိုင်း၊ Miranshah ဒေသတွင် တာလီဘန်များနှင့် လက်တွဲခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဒါကာနှင့် နေပြည်တော်အစိုးရများသို့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အကြမ်းဖက်ကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်လှန့်ပြီးချိန်တွင် အိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့် ပါကစ္စတန် စစ်ထောက်လှမ်းရေး (ISI) မှ Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed (JeM), Harkat ul Jihadi al Islami (HUJI)နှင့် Tehrik-e-Azadi Arakan (TAA)ကဲ့သို့သော ဒေသတွင်း အစ္စလာမ္မစ်အစွန်းရောက် အဖွဲ့အစည်းများမှ တစ်ဆင့် ဘင်္ဂါလီမူဆလင် ဒုက္ခသည်များကို အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် စုဆောင်းလေ့ကျင့်ကာ လုံခြုံရေးအားနည်းသည့် အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်မည်ကို အထူးစိုးရိမ် ပူပန်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်များထံမှ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များစွာ တိုးပွားလာခြင်းသည် ရရှိထားသော သက်သေခံသတင်းအချက်အလက်များအရ ၎င်းတို့အား ပါကစ္စတန်အခြေစိုက်ဖောက်ခွဲရေး ပါရဂူများထံမှ ဒေသခံစစ်သွေးကြွများအဖြစ် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီး ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အား ရင်ဆိုင်သည့်အခါ မည်သို့ အသုံးချရန် စနစ်တကျလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိကြောင်း အခိုင်အမာသိရှိရပါသည်။
Source : Let seeks foothold in Myanmar Shishia, Hindustan Times.
Posted by Koko Mg at 11:23 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လဲ ဘာလဲ
ရှေးဦးစွာ ကျွန်တော် မေတ္တာရပ်ခံထားပါရစေ ။ ယခုတင်ပြတဲ့ဆောင်းပါးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အရေးအသား အတွေးအခေါ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးသမားတဦးအနေနဲ့ခံစားရတာကို ရေးသား တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒီလို မေတ္တာရပ်ခံထားတာဟာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့မိဖနှစ်ပါးက ဆိုဆုံးမခဲ့ လို့ ဘဲ ကိုယ့်ထက် အသက်-၂-နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခုလို တောင်းပန်ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ - ကောင်းပါပြီ- ကျွန်တော်ဟာ မိဖဆုံးမခဲ့ တဲ့သားသမီး ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ပါပြီ ။
ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေရမယ်-လေးစားထိုက်သူကို လေးစားရမယ်- ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုရမယ်လို့ကျွန်တော့်ရဲ့ကွယ်လွန်သူ မိဖနှစ်ပါးက ဆုံးမသြ၀ါဒ ပေးပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့ လို့ လဲ ရိုသေ လေးစား ဂုဏ်ပြုခြင်းများကို ကျွန်တော်ဟာ ထာဝစဉ် နှလုံးသွင်းပြီး အမြဲမပြတ် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်တတ်တယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးလောကကို -၁၉၆ရ-ခုနှစ် သြဂုတ်လ-၁၃-ရက်နေ့ ကစလို့ခြေစုံပစ်-ခေါင်းပစ်-တကိုယ်လုံးဂျွမ်းထိုး ၀င်ရောက်ခဲ့ သူဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့်မို့ လို့နိုင်ငံရေးစိတ်-အမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ပါတ်သက်လာရင် ခြေမထိပ် လက်ထိပ်ကအစ ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားအထိ နာကြင်တတ်တယ် ။
ခုအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ နိုင်ငံရေးရာသီဥတု တခုပြောင်းလဲသွားနေတယ်ဆိုတာကို သိနေကြတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ ဆိုတော့ လွန်ခဲ့ တဲ့အနှစ်-၂၀- ကဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အော်ခဲ့ တဲ့စကားသံ- ပခုံးပေါ်မှာ ထမ်းခဲ့ တဲ့ပိုစတာတွေကြောင့် အမာရွတ်တွေဟာ ခုအချိန်ထိ အနာမကျက်သေးဘဲ ရှိနေသေးတယ် ။ တိုက်ပွဲဟာ မပြီးဆုံးသေးဘူးဆိုတာ သိနေလို့ ဘဲ ဖြစ်တယ် ။ တချိန်က ကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ခဲ့ တဲ့ကမ္ဘာကို တုန်လှုပ်စေတဲ့အသံကို နားဆင်ကြည့်ပါ ။
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်- လွပ်မြောက်ရေး- ဒို့ အရေး )
( မင်းကိုနိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွပ်မြောက်ရေး ဒို့ အရေး )
( စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး -ဒို့ အရေး )
ဒီကြွေးကြော်သံတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဟာ ကြွေးကြော်နေခဲ့ ကြတယ် ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့လည်ချောင်းထဲက အသံတွေဟာ ပြာသထက်ပြာလာတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဇွဲ မလျှော့ဘဲ အော်မြဲတိုင်း အော်ခဲ့ ကြတယ် ။ ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒီကြွေးကြော်သံ သုံးခုကို အဓိကထားပြီး လှုပ်ရှားခဲ့ ကြတယ် ။
ကံအားလျှော်စွာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နေအိမ်ကအကျယ်ချုပ် ကျခံရာကနေပြီး လွပ်မြောက်လာတယ် ။ နောက်တော့ မင်းကိုနိုင်တို့-၈၈-ကျောင်းသားအဖွဲ့ တွေ လွပ်မြောက်လာတယ် ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွပ်မြောက်လာတယ် ။ ကုန်ကုန်ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့ တဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ တယောက် မကျန်လွပ်မြောက်လာခဲ့ တယ် ။
ဒီတော့ခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့မင်းကိုနိုင်တို့ အပါအ၀င် ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွပ်မြောက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ကြွေးကြော်သံတွေကို ပြောင်းလဲပြီး ကြွေးကြော်ရတော့မယ်ပေါ့ ။ ဒီတော့ ( စစ်အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး-ဒို့ အရေး ) ဆိုတာကိုဘဲ ကြွေးကြော်ရတော့မယ်ပေါ့ ။
ဒါပေမဲ့အဲဒီ ( စစ်အစိုးရပြုတ်ကျရေး-ဒို့ အရေး ) ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံဟာ လုံးဝ ကြွေးကြော်ရခြင်း မရှိတော့ဘူး ။ ပျောက်ဆုံးမလှ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ ရတယ် ။ အဲဒါဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က သမ္မတဦးသိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်တဲ့အစိုးရရဲ့ပါလီမန်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ လို့ ဘဲ ဖြစ်တယ် ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သွားလို့ဖြစ်တယ် ။ နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ ချက်ချင်းပျောက်ပျက်ကုန်ကြတယ် ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားညွန့် ပေါင်းအစိုးရဆိုတာကလဲ ဒီ့လောက်ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်ခဲ့ ပါလျှက် ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းခဲ့ ရတယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားအဖွဲ့ ကလဲ ဖျက်သိမ်းခဲ့ ရတယ် ။ အခြားသော အတိုက်အခံ အဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ ဖျက်သိမ်းခဲ့ ရတယ် ။ ဒါတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီး နိုင်ငံတကာကို ခရီးသွားခြေဆန့်နိုင်ငံတကာက ချီးမြှင့်တဲ့ဆုတွေကို လက်ခံယူပြီး ကမ္ဘာပတ်သွားနိုင်ခဲ့ လို့ ဖြစ်တယ် ။ စစ်အစိုးရပြုတ်ကျရေး ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံအစား ပြည်တွင်းမှာကေ ပြည်ပမှာပါ ဟိုဟာလုပ်ပေးပါ-ဒီဟာလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့အစိုးရဆီက လက်ဝါးဖြန့် တောင်းခံရတဲ့ကြွေးကြော်ရတဲ့အသံမျိုးကို ပြောင်းလဲသွားစေတယ် ။ ဒါက ဘာကို ပြသလဲဆိုရင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ဟာ မရှိတော့တဲ့လက္ခဏာကို ပြသလိုက်တာဘဲဖြစ်တယ် ။
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက်ထောက်ခံနေတုံးဘဲဖြစ်တယ် ။ ဒီလိုနဲ့သမ္မတဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတဲ့စကားကို နားနဲ့ မဆန့် ကြားလာတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ် ။ ကျွန်တော်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်ကြီး တနေရာသော်၎င်း-ဒုသမ္မတရဲ့ နေရာသော်၎င်း ထိုက်တန်သူအဖြစ် ဆောင်းပါးတွေနဲ့အားပေးရေးသားခဲ့ သူဖြစ်တယ် ။ ဒါပေမဲ့-၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်ပြင်ပေးမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလဲ သတိလက်မလွပ် အကြံပြု ရေးသားထားခဲ့ သူဖြစ်တယ် ။
၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်ရှိကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက မပြင်ဆင်ဘူးဆိုရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ပြင်ကြဖို့လိုတယ် ။ နိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းက ရေးဆွဲထားတဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွေကို စုပေါင်းလေ့လာပြီး ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းဟာက လက်ခံနိုင်တဲ့ဥပဒေအချက်အလက်မျိုးကို ထည့်သွင်းရမယ်လို့ ဆိုပြီး အပြီးသတ် ရေးဆွဲ ရမှာဘဲဖြစ်တယ် ။ ခုတော့ ဘယ်သူကမှ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ မရေးဆွဲသေးတဲ့ အပြင် နုတ်မှထုတ်ဖေါ်ပြီး ကျမသမ္မတဖြစ်ချင်ပါသေးတယ်လို့ပြောလာတဲ့ အထိ နိုင်ငံရေးသိက္ခာကျလောက်အောင် ဖြစ်လာတာကတော့ ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မကောင်းတဲ့ဝေါဟာရဖြစ်တယ် ။
ကျွန်တော်တို့ လို နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးတွေ ရေးသာေးနသူများက ဝေဖန်ထောက်ပြနေတာဟာ မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ပေါ်လီစီတွေကို ချပြရေးသားလို့ရတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို နိုင်ငံရေးပါတီ တခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သမ္မတရာထူးလိုချင်တယ် ပြောရအောင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကလဲ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ဖြစ်နေသေးတယ် ။ သူ့ အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကတော့ သူ့အနေနဲ့သမ္မတရာထူးမှာ ရှိနေသရွေ့ ကတော့ ဒီစကားကို ပြောလို့ မကောင်းပေဘူးပေါ့ ။
ခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီလိုစကားလက်လွပ် ပြောဆိုတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ပြောစရာဖြစ်လာပြီ ။ လူမျိုလို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်တတ်တယ် ဆိုတာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဋ္ဌါနနဲ့ပြည်သူ့ အင်အားဦးစီးဋ္ဌါနရဲ့လက်ကိုင်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်တယ် ။ နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာ အချုပ်အချာနယ်မြေပိုင်စိုးမှုကြောင့် သူ့ ရဲ့မြေတလက်မကိုမျှ မည်သည့်အခြားနိုင်ငံသားတွေကို တနာရီ တမိနစ်မျှ အလကား နေထိုင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သိပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီလိုဘဲ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ့ခိုးဝင်ကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အခွင့်အရေးများကိုလဲ ချမှတ်ထားတာရှိတယ် ။
နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ဥပဒေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ခိုးဝင်ကျူးကျော်သူများကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးခြင်းဆိုတာဟာ ဒွန်တွဲနေတဲ့ဥပဒေတွေတွေဖြစ်တယ် ။ တချိန်တည်းမှာဘဲ နိုင်ငံအတွင်းမှာ လူဦးရေ ပေါက်ဖွားနုံးနဲ့စီးပွါးရေး-ပညာရေး-ကျန်းမာရေး-လူမှုရေး-စတာတွေကို စာရင်းပြုစုကောက်ယူရတဲ့ -သန်ကောင်စာရင်း လူဦးရေ ကောက်ယူရေးဆိုတာ ရှိတယ် ။ ခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူဦးရေ ထိမ်းချုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ဒေသန္တရစည်းကမ်း ကိုထုတ်ပြန်ပေးတယ် ။ မြန်မာ့ကျေးရွာ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ဂါမစည်းကမ်းဆိုတာ ရှိတယ် ။ အဲဒါကတော့ ရပ်စည်းကမ်း ရွာစည်းကမ်း ထုတ်ပြန်ထားတာကို ဂါမစည်းကမ်းလို့ ခေါ်တာဖြစ်တယ် ။
ခုတော့ ဒေသန္တရ အမိန့် ကို ထုတ်ပြန်လိုက်တယ် ။ မိသားစုတစုလျှင် ခလေးနှစ်ယောက်ထက် မယူရ ဆိုတာဟာ ဂါမစည်းကမ်းဖြစ်တယ် ။ ဘာကြောင့် ထုတ်ပြန်ရသလဲ ဆိုတာ လေ့လာကြည့်ဖို့ လိုတယ် ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အဓိကအားဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေသာ လူဦးရေ များပြားနေရမယ် ။ လူများစုဖြစ်ရမယ် ။ ဒါဟာတိကျတဲ့သဘာဝဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ် ။ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေဟာ ရခိုင်လူမျိုးတွေထက်-၉၀-ရာခိုင်နုံး ကျော်နေတယ် ။ အဲဒီမောင်တောမြို့ နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်မှာ ဒီ့လောက်လူဦးများနေတာဟာ ပထမအချက်အနေနဲ့သူတို့ ရဲ့အိမ်ထောင်သားမွေးမှုဟာ လူ့ ယဉ်ကျေးမှု အသိုက်အ၀ိုင်းအရ လွန်ကဲနေတဲ့လက္ခဏာကြောင့်ဖြစ်တယ် ။ မိသားစုမှာ ခလေး-၃၀-လောက်ရှိသူ- အနည်းဆုံး-၁၀-ယောက်ရှိသူ- မိန်းမ နှစ်ယောက်ကနေ လေးယောက်ယူထားသူ- ပညာမတတ်သူ- ဆင်းရဲသူနဲ့တွက်ချက်ကြည့်လိုက်ရင် ဒီလူမျိုးကို ဘယ်လို ထိမ်းချုပ်ရမှာလဲ ဆိုတာ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မကတောင် ကိန်းဂဏန်းဇယားနဲ့တွက်ချက်ပြီး ကွန်ဒုံးတွေကို ဖြန့် ဝေပေးရတယ် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သိထားဖို့ ရာမှာ ကွန်ဒုံးဆိုတာ ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂက ထုတ်ဝေဖြန့် ဝေပေးထားတယ် ဆိုတဲ့ အဓိကအချက်ဘဲ ဖြစ်တယ် ။ ကွန်ဒုံးဆိုတာဟာ ကာမဆက်ဆံဖို့အတွက် တခုတည်းကိုဘဲ ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတာ မဟုတ်ဘူး ။ ကျန်းမာရေးပြသနာကြောင့်- အေအိုင်ဒီအက်စ် ဆိုတဲ့ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ နဲ့သားခြားဆက်စေဖို့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် ။ ဒီတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတာကို နားလည်ထားတယ်ဆိုရင် ဘာ့ကြောင့် သားဆက်ခြားစေဖို့ထုတ်လုပ်ထားရပါသလဲ ဆိုတာ လေ့လာဖို့ လိုတယ် ။ မိသားစုတစုမှာ သားသမီး အများအပြားမလိုချင်သူများ- ခလေးမမွေးဖွါးနိုင်သူများ -စီးပွါးရေးချို့ ယွင်းသူများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားတယ် ဆိုတာ ယေဘူယျသိကြပါတယ် ။
လူဦးရေ မတန်မဆများပြားနေတဲ့ အတွက် အပြွတ်လိုက် သင်္ဘောသီးသလို မွေးနေတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာ လူ့ အခွင့်အရေးရဲ့လူ့ အရသာ ကာမတဏှာကို ခံစားနိုင်ကြလွန်းလို့မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဋ္ဌါနေတိုင်းရင်းသားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်လူမျိုးစုထက် -၉၀ ရာခိုင်နုံးကျော်ထိ များပြားနေတယ် ။ ဒါကို ဂါမစည်းကမ်းအရ ထိမ်းချုပ်ဖို့ လိုတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမ္မဂကတောင် စီမံကိန်းနဲ့ချမှတ် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ် ။
နောက်တချက်က နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ သို့ မဟုတ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တဦးအနေနဲ့စကားလက်လွပ် ပြောဆိုသင့် မသင့် ဆိုတာ တွက်ချက်ကြည့်ဖို့ လိုတယ် ။ ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မည်ကာမတ္တ သတင်းထောက်တွေရဲ့ပြောဆိုသုံးနုံး မေးမြန်းတာမျိုးကို မစီစစ်ဘဲ သတင်းထောက်ရဲ့အာဘော်အတိုင်း မေးတာဖြေကြားလိုက်ပြီ ဆိုရင် အနာဂါတ်မှာ ဘာတွေ ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ လိုတယ် ။ ခုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နုတ်မစောင့်စည်းမှု ပါးစပ်သရမ်းမှုကြောင့် ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် ဘ၀ရောက်သွားရပြီ ။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မှာ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်တဲ့အခြေအနေများစွာ ရှိနေတယ် ။ ခုတော့ မိမိကိုယ်ကို ကော့မှူးမြို့ နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးဖြစ်နေတာကို သတိမထားဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တာဝန်နဲ့ဒီဂရီအရ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေသန္တရအမိန့်သို့ မဟုတ် ဂါမစည်းကမ်းထုတ်ပြန်ထားတာကို ဝေဖန်ပြောဆိုတာဟာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနဲ့ဘောင်ကျော်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ် ။ တိကျစွာပြောရရင် အရာခပ်သိမ်းဟူသမျှ အစိုးရရဲ့ပေါ်လီစီတခုကို ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်မျိုးရှိရင် လွှတ်တော်ထဲမှာ သွားရောက်တင်ပြပြောဆိုသင့်တယ် ။ ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်က ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်ဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မဟုတ်သလို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးလဲ မဟုတ်ဘူး ။ ပါရဂူဘွဲ့ ရ တဦးဖြစ်တဲ့ အလျှောက် ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့စီစစ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို ကမ္ဘာသိတင်ပြရာမှာ တကယ့်စံနမူနာ ယူထိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကောင်း တဦးဖြစ်တယ် ။ ရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှိရင် အဲဒီလို ပြောဖို့ လိုအပ်တယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပုံနဲ့ဒေါက်တာရင်ရင်နွယ်ရဲ့တင်ပြချက်တွေ ချဉ်းကပ်ပုံတွေဟာ လွန်စွာကွာခြားနေတယ် ။
တကယ်တော့ လူမျိုလို့လူမျိုးပျောက်ကွယ်သွားမဲ့တကယ့်အန္တရယ်ကြီးမားတဲ့ပေါ်လီစီရေးရာတွေနဲ့ ပါတ်သက်လို့နုတ်သရမ်းပြီး ပြောဆိုတာဟာ မိမိပါတီရဲ့အနာဂါတ်အတွက်သော်၎င်း- မျက်မှောက်ကာလအတွက်သော်၎င်း အကျိုးယုတ်စေတယ် ။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာတွေဟာ နုတ်ကိုစောင့်စည်းရပါတယ် ။ ထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စကားတလုံးဟာ လွန်စွာ တန်ဖိုးရှိစေပြီး ကမ္ဘာကျော်သောမိန့် ခွန်းမျိုး ဖြစ်စေတတ်တယ် ။ ဒါဟာ နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ကာကွယ်ရမဲ့အခြေအနေ- အမျိုးသားကိုယ်ကျိုးအတွက် ကာကွယ်ရမဲ့ပေါ်လီစီတွေ ဖြစ်တယ် ။ အကြမ်းဖက်သမားများအတွက် လူ အခွင့်အရေးဆိုတာ နေရာမရှိဘူးလို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြနေတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြင်ပါလိမ့်မယ် ။ ဒါဟာ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံ လိုက်ရတဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံက လန်ဒန်သားတွေဖြစ်တယ် ။ အဲဒီလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်ဖက်က ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ မောင်တောမြို့ နဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့ နယ်မှာ လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရလွန်းလို့နောက်ကို ဒီ့ထက်မက ဆိုးဝါးတဲ့လူ့ အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်ခံရမှာကို ကာကွယ်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ က ဒေသန္တရအမိန့် နဲ့သူ့ ပြည်နယ် သူ့ နယ်မြေမှာ ချမှတ်တာကို လက်လွပ်စပယ် ပြောဆိုလိုက်တာဟာ နောက်ဆုံးမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အတွက် ဆိုးကျိုးများကို ဖန်တီးသွားတာဘဲ အဖတ်တင်သွားတယ် ။ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အဖွဲ့ ချုပ်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့အဲဒီလိုဘ၀မျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး ။ ခုတော့ တကယ်ဘဲ ဖြစ်သွားပါပြီကော ။ ဒါ့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘယ်လဲ ဘာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော်မေးလိုက်တာဖြစ်တယ် ။
Posted by Koko Mg at 1:50 AM No comments:
ဘင်္ဂါလီနှင့် သန်း ၂၀ ၏ မနက်ဖြန်
ကမ္ဘာပြားပြီ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တုန်းကတော့ မြန်မာပြည်မပါလို့ တွေးခဲ့တာ ရှိပေမယ့် နှေးလွန်းလို့။ အခုတော့ ကမ္ဘာတကယ်ပြားသွားပြီ။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ဂျပန်က သူငယ်ချင်း၊ အမေရိကားက သူငယ်ချင်း၊ မန္တလေးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြောနေ ဆိုနေ လိုက်တာ၊ လူချင်းလည်း မသိ။
နေရာဌာန အကွာအဝေး ဆိုတာကို အင်တာနက်ကြီးက ချုံ့ချ ပစ်လိုက်တာ ဘေးချင်းကပ်ပဲ ရှိနေ သလိုလို။
တို့အပြင် လက်သည် တရားခံတွေ ထဲမှာ ရေကြီးတာလည်း ပါသကိုး။
( from face book )
Posted by Koko Mg at 2:15 PM No comments:
Interview with Dr.Yin Yin Nwe Rakhine Commission)
Posted by Koko Mg at 6:18 AM No comments:
ရခိုင်ပြည်တွင် ရခိုင်လူမျိုးများရှိနေသမျှ ဘင်္ဂလီမျာ...